ဧရာဝတီ| February 22, 2013 | Hits:16,600
| | ဒေါက်တာစိုးခိုင် (ဓာတ်ပုံ – ထက်နိုင်ဇော် / ဧရာဝတီ)
Sandra Lin February 22, 2013 - 9:16 pm 1) ကနေဒါနိုင်ငံ Canade တက္ကသိုလ်တွင် Food Technology Diploma ရရှိခဲ့သည်။
Reply Dr.Soe Khine February 25, 2013 - 2:08 pm Thank you for your comment and i am glad to make some clarifications about the mistakes int he interview due to my fault but not the reporter.
Reply မြန်မာတိုင်းရင်းသူ February 23, 2013 - 3:20 am သည် အင်တာဗျူးအတွက် ဧရာဝတီကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အလွန် အဖိုးတန်တဲ့ မှတ်သားဘွယ်ရာ စကားတွေပါ။
Reply Dr.Soe Khine February 25, 2013 - 1:43 pm Thank you for the encouraged comment,i am staying in Yangon not in England and organizingaEducation and Research center of Biotechnology & Food Science,we contribute what we learn by articles,seminars,workshops and short course training as requested whenever available.Be invited to contact us via this email address.
Reply tun aung February 23, 2013 - 12:25 pm အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဧရာဝတီရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းလေးပါ၊အဲဒါကိုပြည်သူအများသိရှိဗဟုသုတ
Reply Dr.Soe Khine February 25, 2013 - 1:45 pm Than you, we are contributing what we are learning by articles from the journals issuing.Welcome to share all we both studying.
Reply Min Gao February 25, 2013 - 1:46 pm Then for the sake of public health what is your advice to consumers?
Reply မြန်မာတိုင်းရင်းသူ February 26, 2013 - 3:33 am သည် comment က အပေါ်ဆုံးက comment ရေးထားတဲ့ Sandra Lin ကို ရည်ညွှန်းတယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မလဲ သူ့ မှတ်ချက်ကို ရေးပြီး စိတ်ထဲ မအီမလည် ဖြစ်မိတယ်။ သည်လို သတင်း၊ ဆောင်းပါးတွေ အမှားကင်းကင်း ဖတ်ချင်ပေမယ့် တခါတလေ စာလုံးပေါင်းအမှား၊ နာမည် အခေါ်မှားတာလေးတွေ နားလည်စွာနဲ့ ဖတ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်မိပါတယ်။ လုံးဝ နားမလည်တာကျတော့ သည်လို comment ကဏ္ဍမှာ မေးချင်မေး၊ မဟုတ်လဲ သတင်းဌာနကို တိုက်ရိုက် ဖုန်းခေါ်၊ အီးမေးလ်နဲ့ မေးမိပါတယ်။ မှားတာလေးတွေ တွေ့လို့ စေတနာနဲ့ သတိပေးတာပါ၊ ပြင်ပေးတာပါ စကားခံပြီး စာရေးဘူးပါတယ်။
Reply Aung USA March 16, 2013 - 8:24 am First of all, I would like to thank Sandra Lin for pointing out every possible mistake that might cause confusion to readers. She seems tough but is right on. Also, my much appreciation goes to Dr. Soe Khine for clarifications and thorough explanations on each line. I am sure most readers will understand your willfulness on food safety which is very important to public. Both comments are valuable, knowledgeable, and well done. Kudos to all commenters. Finally, thank you Irrawaddy for this interview.